" कञ्चनजंगा News " – " सधैँ अटल "
No Comments on कहाँ छ दिलमायाको मोबाइल…?
आफ्नै डेरामा मृत फेला परेकी लोक दोहोरी गायिका दिलमाया सुनारको अहिलेसम्म उनले प्रयोग गरेको मोवाइल भेटिएको छैन् । उनको हत्या गरेको अभियोगमा काभ्रेका सुर्य श्रेष्ठ प्रहरीको नियन्त्रणमा छन् ।
दिलमायाले शनिबार राति फेसबुकमा ‘कसैको माया पाउन जति कोसिस गरेपनि पाउन सकिन, तर पनि हार खाइन । तर अहिले धेरै गाह्रो भयो, म बाँचेर पनि दिनदिनै मर्न सकिन आमा’ भन्दै स्टयाटस पोस्ट गरेकी थिइन् ।उक्त पोस्ट उनी आफैले गरेकी हुन् की कसैले गरिदिएको हो त्यो अझै रहस्यमय बन्दै गएको छ। उनको शव भेटिएपनि आजसम्म उनले स्ट्याटस पोस्ट गरेको मोवाइल भने नभेटिएको प्रहरीले जनाएको छ।
मोवाइल खोज्न प्रहरीले उनको डेरामा खानतलासी गरिसकेको छ । सँगै सुतेका प्रेमी श्रेष्ठले दिलमाया झुण्डिएको देखेपछि हतार हतार तल झारेको र सल लिएर महाराजगञ्जको झाडीमा फालेको प्रहरीसमक्ष बयान दिएका छन् ।
दिलमायाको पोस्टमार्टम गरेको अस्पताल त्रिवि शिक्षण अस्पतालले भने मृत्युको कारण ‘ह्याङ्गिङ’ नै भएको देखाएको छ । दिलमायाका बुवाले भने श्रेष्ठविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जाहेरी दिएका छन् । श्रेष्ठलाई प्रहरीले थप ५ दिन म्याद लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ।
No Comments on समझदारी होस् त उपेन्द्र–बाबुरामको जस्तो, दुनिया चकित पारेर यसरी लाग्नेभए आआफ्नो बाटो !
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्षद्धयले दुनिया चकित पार्ने समझदारी गरेका छन् । हासीखुी सहज तरिकाले फुटाउनका लागि अध्यक्ष्य उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई सहमत भएका हुन्।
बुधवार संसदीय दलको कार्यालयमा कार्यकारिणी अध्यक्ष यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष यादवबीच भएको भेटवार्तामा हाँसी हाँसी मिलेर नै पार्टी फुटाउनका लागि सहमत भएका हुन्। जसपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक प्रमोद कुमार साहले पनि उक्त भेटवार्तामा दुवै जना सौहार्दपूर्ण तरिकाले नै छुट्टिन सहमत भएको बताए ।
’पार्टीमा एक साथ रहन नसकिने भन्ने कुरामा दुवै नेता निष्कर्षमा पुग्नुभएको हो,’ साहले भने,’ जसरी हाँसी हाँसी दुई पार्टी बीच एकता भएको थियो त्यसरी नै हाँसी हाँसी पार्टी फुटाएर आ–आफ्नो बाटो लागौं भन्ने कुरामा दुवै जना सहमत हुनुभएको छ,’ साहले भने।
उपेन्द्र यादव पक्षका नेताहरुले पनि दुई नेताबीच सहमतिमै अलग हुने सहमति भएको पुष्टि गरे । सिंहदबारमा भएको छलफलमा यादवले आफूले जानुस् भनेर नभन्ने तर अलग्गिने इच्छा छ भने नरोक्ने जवाफ दिएका उनी निकट स्रोतले बतायो ।
नेताहरुका अनुसार सहमतिमा अलग हुँदा केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरुलाई कता जाने हो रोज्न दिने भनिएको छ । तर हालको अवस्था हेर्दा यादव पक्षको बहुमत भएकाले जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता यादवसँग रहने सम्भावना छ ।
आफूहरुको बहुमत पुग्ने सम्भावना कम भएकाले नयाँ पार्टी बनाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भट्टराई पक्षको विश्लेषण छ । एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘सायद छिट्टै केन्द्रीय सदस्यहरुको भेला बोलाइन्छ होला । नेताहरु छलफल गर्दै हुनुहुन्छ ।’
No Comments on हिक्मतको प्रष्टीकरण: जिस्किँदा-जिस्किँदै त्यस्तो भयो – हातपात गरेको छैन
रेस्लर अस्मिता जुरेलीले हिजो रोपाइँ उत्सव मनाउने क्रममा अपरिचित व्यक्तिले आफूमाथि हातपात गरेको आरोप लगाइन् । युवा संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा संघकै एक युवाले दु,र्व्यवहार गरेको उनको दाबी छ ।
अस्मिताले आ,रोप लगाएका व्यक्ति युवा संघ नेपालकै केन्द्रीय सदस्य हिक्मत बोहरा ‘हिलारी’ रहेको खुलेको छ । नेपाल प्रेसको सम्पर्कमा आएका बोहराले आफूले नियतवस अस्मितामाथि कुनै दु,र्व्यवहार नगरेको प्रष्टीकरण दिए । अस्मिताले भनेजस्तो आफूहरू अपरिचित पनि नभएको उनको भनाइ छ ।
‘हामी एउटै पार्टीका कार्यकर्ता हौं, सधैँ कार्यक्रमहरूमा भेट भइरहने बहिनी हो,’ उनले भने, ‘जिस्किँदा-जिस्किँदै यस्तो घटना भयो ।’ रमाइलो गर्ने क्रममा जिस्केर हिलोमा लडाएको भए पनि आफूले हातपात भने नगरेको उनको भनाइ छ ।
‘उहाँले किन गलत सोच्नुभयो थाहा छैन, तर मैले गलत नियतले उहाँलाई छोएको थिइनँ,’ बोहराले भने । अस्मिताले आफूमाथि जाइलागेपछि उनलाई रोक्न दुवै हात समातेको बोहोराले बताए । उनले घटनालाई अतिरञ्जित नबनाउन सबैसँग आग्रह गरेका छन्।
No Comments on दुई बालकलाई बाढीबाट जोगाउने यी बाबुछोराको सर्वत्र चर्चा, जसले आफ्नै ज्यान जोखिममा राखेर कमालको शैलीमा यसरी गरे उद्धार, तस्विर भाइरल [ भिडियोसहित ]
काठमाडौं । आफ्नै ज्यान जोखिममा राखेर दुई बालकहरुको बाढीबाट उद्दार गरेको भिडियो अहिले विश्वभरी नै भाइरल भइरहेको छ ।
यति साहास देखाए र यति बलियो प्रस्तुती दिए कि देख्नेहरु सबै स्तब्ध भइरहेका छन् ।
बालक उद्धार भइसकेपछि हर्षका आँशु बगाउँदै उनीहरुलाई सलाम गरिरहेका छन् । भिडियो एक ओमानी नागरिकको हो । उनी यतिबेला विश्वव्यापी रूपमै प्रशंसित बनेका छन् ।
उनले डरलाग्दो बाढीबाट साहसिकरुपमा एक्लै दुई बालकको उद्दार गरेको भिडियो फुटेज सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको छ । खासमा यो उद्धारमा उनका बुवा पनि संलग्न थिए ।
यो घटना भने गत शुक्रबारको हो । अलि बिन नासेर अल वार्दी नामका युवक आफ्नै घरमा बुवासँग बसेर वर्षातका बारेमा कुराकानी गरिरहेका थिए । उनले वादी बहला नदीको सुन्दर दृष्यावलोकनका लागि आफूसँग जान बुवालाई प्रस्ताव गरे ।
जब उनीहरु आफ्नो घरबाट बाहिर निस्किए, बाबु–छोराले देखे कि बाढी उर्लिएको नदीमा फसेका दुई बच्चाहरु सहाराका लागि चिच्याइरहेका थिए । उनीहरु एउटा जैतुनको रुखको जरालाई पकडेर आफ्नो ज्यान बचाउन प्रयासरत थिए ।
‘त्यो देखेपछि मैले आफ्नो कपडा फुकालेँ । बुवाले मेरो कम्मरमा एउटा डोरीले बाँध्नुभयो र अर्को छेउ आफूले समात्नुभयो ।
म बाढीमा होमिएँ,’ अल वादीले भने । त्यसबेला आफ्नो दिमागमा बच्चाहरुको ज्यान जोगाउने कुरा मात्रै रहेको र भगवानको प्रार्थना गरिरहेको उनी बताउँछन् ।
‘म जोडजोडले चिच्याएर उनीहरुलाई नआत्तिनका लागि हौसला दिइरहेको थिएँ । वरिपरी कुनै बलियो चिज भए त्यसलाइ समात्न भनिरहेको थिएँ । तर, त्यस्तो चिज केही थिएन । जसरी–तसरी म उनीहरुसम्म पुगेँ । उनीहरुलाई छुनासाथ मेरो आँखाबाट बर्बरी आँशु बगे ।
उनीहरुलाई मैले अंगालेँ । चिन्ता नलिन आग्रह गरेँ । म जसरी पनि तिमीहरुलाई बचाउँछु भने । तर सानो केटो चाहिँ धेरै डराइरहेको थियो । म मर्न चाहन्न भनेर रोइरहेको थियो ।’ उनले वर्णन गरे ।
अल वार्दी भन्छन्, ‘म भगवानलाई धन्यवाद दिन्छु कि मैले उनीहरुलाई सकुशल उद्दार गर्न सकेँ ।’ अल वार्दीका अनुसार ती बच्चाहरु १३ र ७ वर्षका थिए । उनीहरु निक्कै वजनका देखिन्छन् ।
उनीहरुलाई पानीले निक्कै धक्का दिएको छ । झण्डै डुब्ने पानी, ठाडो खहरे खेलाको शक्तिशाली पानीको झड्कालाई समेत जित्दै दुई जनालाई नै च्यापेर उनले खोला बाहिर निकाल्छन् । यो कुनै चलचित्रमा समेत समावेश गर्न नसकिने दृष्य विश्वभरी नै फैलिरहेको छ । एजेन्सी
مشهد بطولي لـ شاب عماني ينقذ طفلين من موت محقق pic.twitter.com/sWoyKfj35V
— جريدتكم (@ImeGrop) June 25, 2022
No Comments on भक्तपुरमा युवक र युवती सहमतिमै रिसोर्ट बसे ! बिहान भएपछी युवतिले…
भक्तपुरको सूर्यविनायकस्थित एक रिसोर्टबाट मंगलबार बिहान एक युवक बलात्कार आरोपमा पक्राउ परे। रुहोसा रिसोर्टमा सँगै बसेका युवकले आफूलाई बलात्कार गरेको भन्दै युवतीले प्रहरीलाई जानकारी गराएकी थिइन्।
युवती मंगलबार बिहान सवा ४ बजे ती युवकले आफूलाई बलात्कार गरेको भन्दै प्रहरी सम्पर्कमा पुगेकी थिइन्। २१ वर्षीय ती युवतीले बताए अनुसार प्रहरीले आरोपी युवकलाई पक्राउ गरेको हो।
भक्तपुर प्रहरी परिसरका एसपी राजु पाण्डेका अनुसार पक्राउ पर्नेमा सूर्यविनायक नगरपालिका-२ बालकोटका २५ वर्षीय मनिष खत्री रहेका छन्। उनलाई प्रहरी टोलीले जगातीबाट पक्राउ गरेको हो।
अनुसन्धानका क्रममा ती युवक र पीडित महिला सोमबार साँझ रुहोसा रिसोर्टमा सँगै बसेका पाइएको अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले बताएका छन्। उनी भन्छन्, ‘अनुसन्धानका क्रममा उहाँहरु अघिल्लो साँझ रिसोर्टमा सँगै बसेको पाइयो।
भोलिपल्ट बिहान युवती आफैँ आफू बलात्कृत भएको भन्दै प्रहरी सम्पर्कमा आएकी थिइन्।’ यद्यपि घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
बैतडीमा बलात्कार आरोपमा एक वडाध्यक्षससिहत दुई जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउपर्नेमा जिल्लाको मेलौली नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष शरदसिंह नेगी र सोही ठाउँका केशवसिंह नेगी रहेका छन् । एक २८ वर्षीया महिलालाई गत चैत १५ गते बलात्कार गरेको आरोपमा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको हो । पीडितको उजुरीका आधारमा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी निरीक्षक लोकराज जोशीले जानकारी दिए ।
पीडित महिलाको स्वास्थ्यपरीक्षण उजुरी दिएकै दिन जिल्ला अस्पतालमा गरिएको छ । आरोपित दुवैजनालाई हिरासतमा राखी अनुसन्धान सुरु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । पीडित महिला परिवारकै संरक्षणमा रहेकी छन् ।
अमेरिकामा नेपाली मूलकी सराहनाले गरिन् कमाल
No Comments on अमेरिकामा नेपाली मूलकी सराहनाले गरिन् कमाल
काठमाडौं । विश्वकै सम्राट राज्य न्यूयोर्कमा नेपाली मूलकी सराहना श्रेष्ठले कमाल गरेकी छ । सराहनाले डेमोक्रयाटिकको तर्फबाट राज्य विधानसभा प्राथमिक निर्वाचनमा विजयी भएकी हुन । तर आगामी नोभेम्बरमा श्रेष्ठले रिपब्लिकनका प्रतिद्वन्दीसँग भिड्नु पर्ने हुन्छ ।
उनले १०३ औँ विधानसभा डेमोक्रयाटिक प्राथमिक निर्वाचनमा १३ कार्यकालका केभिन काहिललाई पराजित गर्न सफल भएकी छिन । श्रेष्ठको जितसँगै सन् १९९९ पछि पहिलो पटक १३ कार्यकालको बिजेता रहेका काहिल आगामी नोभेम्बरमा हुने विधानसभा चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने भएका छन् ।
अनौपचारिक नतिजा अनुसार श्रेष्ठले ५१ प्रतिशत मत ल्याएकी छन् भने वर्तमान सभासद् केभिन काहिलले ४७।५ प्रतिशत मत प्राप्त गरेका छन् । अनुपस्थित मतपत्रहरू अझै गणना गर्न बाँकी छ। श्रेष्ठ पहिलो पुस्ताकी नेपाली अमेरिकी हुन ।
न्यूयोर्ककी युवा अमेरिकी सांसद अलेक्जान्ड्रिया ओकासियो कोर्टेजले श्रेष्ठलाई समर्थन गरेकी थिइन् । काहिलले चुनावको नतिजालाई स्वीकार गरेका छन् । उनले ‘प्राथमिक निर्वाचनको नतिजा स्पष्ट छ र मेरो प्रतिद्वन्द्वी सराहना श्रेष्ठ विजयी भइन्,’ काहिलले भने ।
No Comments on गायिका दिलमाया सुनारको पोष्टमार्टम रिर्पोटले झनै पिडा दियो परिवारलाई
केहि दिन अघि आफ्नै कोठामा मृत भेटिएकी लोक दोहोरी गायिका दिलमाया सुनारको पोष्टमार्टम रिर्पाेट आएको छ ।
ह त्या हो या आ त्म ह त्या भन्ने बिषयमा प्रहरी नै दोधारमा रहेका बेला पोष्टमार्टम रिर्पाेट बाहिर आएको हो । पोष्टमार्टमको प्रारम्भिक रिपोर्ट बारे चिकित्सकले प्रहरीलाई जानकारी दिई सकेका छन् ।
बिशेष स्रोतका अनुसार पोष्टमार्टम रिर्पाेटले आ त्म ह त्या नै हो भन्ने संकेत दिएको छ । अनुषन्धान प्रभावित हुने देखिए पछि प्रहरीले पोष्टमार्टम रिर्पाेट सार्वजनिक गरिहालेको छैन ।
यद्यपी प्रहरी वृत्त, बालाजुका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी गौतम मिश्रले पोष्टमार्टमको आधिकारिक रिपोर्ट आइनसकेको बताएका छन् । रिर्पाेटले उनको मृ त्यु घाँ टी थि चिए र नभएको देखाएको छ ।
शरीरमा अन्यत्र पनि कुनै चो टप टक नदेखिएकोले पनि झु ण्डि एरै आ त्म ह त्या गरेको हुन सक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ ।
उनले आफ्नो मृत्यु हुनु भन्दा अगाडी आएका कुराहरु पत्ता लगाउनका लागि भिसेरा चेकको तयारी भईरहेको बताईएको छ । शनिबार बिहान पौने ११ बजे सुनार कोठामा मृत अवस्थामा भेटिएकी थिइन् ।
अब नेपालमा ठूलो भूकम्प आउने ख तरा : जिल्लाको तातोपानी क्षेत्र रहेका दुई स्थानमा भूकम्पको सम्भाव्यताबारे अध्ययन सुरु गरिएको छ । तातोपानी क्षेत्र रहेको दुहुँ गाउँपालिका– ३ को श्रीवगड र मार्मा गाउँपालिका–४ को तपोवनस्थित तातोपानी क्षेत्रको अवस्थाबारे अध्ययन थालिएको हो ।
पेरिसका प्रोफेसर फेडरिक पेरियर र खानी तथा भूभार्ग विभागका टेक्निकल असिस्टेन्ट राजेश शर्माले यहाँ पुगेर अवस्थाबारे अध्ययन गरेका हुन् । भूकम्पको दृष्टिकोणले पश्चिम नेपालको दार्चुला र बझाङमा बढी जोखिम रहेको हुनसक्ने अनुमानका आधारमा उनीहरुले यहाँको अवस्थाबारे अध्ययन थालेका छन् ।
पश्चिम नेपालमा ५१७ वर्षयता ठूलो भूकम्प गएको छैन । नेपालका ठूला भूकम्पमध्ये अबको १० वर्षभित्र पश्चिम नेपालमा ठूलो भूकम्प आउनसक्ने भूकम्पविद् प्रोफेसर पेरियर बताउँछन् । ‘पश्चिम नेपालमा १० वर्षभित्र ठूलो भूकम्प आउने खतरा छ’, उनले भने, ‘तातोपानी भएको क्षेत्रमा भूकम्प आउने सम्भावना बढी हुने भएकै कारण यहाँको पानीको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न आएका हौँ ।’
दार्चुलाका श्रीवगडको पानीमा त्यति खतराको अवस्था नरहेको उनले बताए । पानीको तापक्रम ६४.६ डिग्री देखिएको उनले जानकारी दिए । ग्यासको मात्रा सिओ–२ मात्रै छ । उनका अनुसार ग्यास बढी भएको भए भूकम्प चाँडो आउने सम्भावना रहन्छ । ‘यहाँ ग्यासको मात्रा अहिले बढेको छैन्, मेरो अनुभवले जुन तातोपानीमा ग्यासको मात्रा बढी हुन्छ त्यो खतरा हो’, उनले भने।
नेपालमा लामो समयदेखि भूकम्प आउने क्षेत्रबारे अनुसन्धान गर्दै आउनुभएका प्रोफेसर पेरियरकले अहिले नै यो क्षेत्रमा जोखिमको अवस्था धेरै नरहेको बताए । उनी थप्छन्, ‘हामीले गरेको अनुसन्धानको डिटेल रिपोर्ट आउन ३÷४ महिना लाग्छ ।’
पछिल्लो समय सुदूरपश्चिमका दार्चुला, बझाङ लगायतका केन्द्र भएर साना भूकम्प भने बढी जाने गरेको टेक्निकल असिस्टेन्ट शर्मा बताउँछन् । ‘मैले भूकम्प मापन केन्द्र सुर्खेतमा बसेर काम गरेको हुँदा यो क्षेत्रमा साना भूकम्प धेरै जाने गरेको थाहा छ’, उनले भने ।
No Comments on चितवनका ५० हजार घरपरिवार बाढीको जोखिममा
A house collapses after its foundations were washed away as the Comoro River is flooded in Dili, East Timor April 4, 2021, in this still image obtained fromasocial media video. Courtesy of Janito DF Afonso/Social Media via REUTERS. ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT JANITO DF AFONSO. NO RESALES. NO ARCHIVES.
काठमाडौं । चितवन जिल्लामा बाढी पहिरोबाट ५० हजार ५०० घरपरिवार जोखिममा रहेका छन् । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले उक्त तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो ।
जिल्ला विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना परामर्शदाता बलराम लुइँटेलका अनुसार जिल्लाका सात पालिकाका दुई लाखभन्दा बढी नागरिक बर्सातका कारण प्रभावित बन्ने छन् ।
बाढीबाट भरतपुर महानगरपालिका बढी प्रभावित हुने देखिएको छ । भरतपुर महानगरपालिकामा ३० हजार परिवार प्रभावित बन्ने अवस्था रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै माडी नगरपालिकाका चार हजार ५०० परिवार, रत्ननगरका पाँच हजार, कालिका नगरपालिकाका एक हजार ५०, खैरहनी नगरपालिकाका ३२० र राप्ती नगरपालिकाका ११ परिवार प्रभावित हुने अवस्था छ ।
यसैगरी पहिरोका कारण भरतपुर महानगरपालिकाका ३००, कालिकाका १००, राप्तीका २०० तथा इच्छाकामना गाउँपालिकाका १२५ परिवार प्रभावित बन्ने अवस्था रहेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ ।
बाढी र पहिराको खतरा बढेकाले सतर्कता अपनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी अशमान तामाङले आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “नारायणी र राप्ती नदीका कारण जोखिम बढेको छ । जोखिम न्यूनीकरणको तयारीमा जुटेका छौँ ।” उद्धारका लागि सुरक्षा निकायलाई सतर्क अवस्थामा रहन निर्देशन दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।
दुर्गा प्रसाईको नजरमा गोविन्द केसी दलाल, अपराधी, भन्छन्–म उसलाई मान्छे नै मान्दिँन
No Comments on दुर्गा प्रसाईको नजरमा गोविन्द केसी दलाल, अपराधी, भन्छन्–म उसलाई मान्छे नै मान्दिँन
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता दुर्गा प्रसाईले डा. गोविन्द केसीलाई लिएर विवादित बयान दिनु भएको छ ।
नेता प्रसाईले एक अन्तर्वार्तामा डा. केसीलाई यो देशको अपराधी भन्नु भएको हो । उहाँको नजरमा डा. केसी नेपालमा भएका मेडिकल कलेज बन्द गरेर नेपाली विद्यार्थीलाई अरु देशमा पठाउने दलाल हुनुहुन्छ ।
डा. गोविन्द केसीलाई दलालको संज्ञा दिदँै प्रसाईले भन्नुभयो, ‘आज उसै (डा. केसी) को कारणले यो देशमा नर्स पढ्न पाका छैनन् ।
तपाईंलाई थाहा छ १० हजार नर्स आज इन्डिया गका छन्, यो मान्छे (डा. केसी) का कारणले… यो देशमा मेडिकल कलेज, शिक्षा, स्वास्थ्य बन्द हुँदैछ अबको पाँच वर्ष पछाडि ।
नर्स अब यो देशमा पढ्न नपाएपछि अब के फिलिपिन्सका नर्स ल्याएर चलाउनुहुन्छ यो देशमा, चलाउनुहुन्छ ?’
फिलिपिन्सका नर्स ल्याएर नेपालीहरुले उपचार थेग्न सक्छन् कि सक्दैनन् भनेर पनि उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । डा. केसीका कारण १३७ वटा मेडिकल कलेज एक वर्षभित्र बन्द भएको आरोप पनि उहाँको छ ।
उहाँले थप आक्रोशित हुँदै भन्नुभयो, ‘यो मान्छे भनेको यो देशको अपराधी, जड हो…मेडिकल शिक्षा सिध्याउने ।’ केसीको आलोचना गर्दा अहिले मान्छेहरुले गाली गर्ने गरेको भन्दै उहाँले अबको पाँच वर्षभित्र असर देखिने पनि चेतावनी दिनुभयो ।
विएण्सी मेडिकल कलेज विर्तामोडका सञ्चालक समेत रहनु भएका प्रसाईको नजरमा डा. गोविन्द केसी कुनै मान्छे नै हुनु हुँदैन् ।
No Comments on एलओडी बन्यो विश्वकै ५२ औं सर्वोत्कृष्ट क्लब
काठमाडौं । ठमेलमा रहेको क्लब एलओडी (लर्ड अफ द ड्रिंक्स) नेपालकै नम्बर वान बनेको छ । यस्तै सो क्लब ‘डीजे म्याग टप १००’मा विश्वभरको ५२ औं स्थानमा पर्न सफल भएको हो ।
क्लबले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी यसबारे जानकारी दिँदै क्लब प्रेमीहरूलाई मनोरञ्जन गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय कलाकारहरुको परिचय गराउने यो प्रारम्भिक कदम भएको जनाएको छ ।
एलओडीका संस्थापक रविन श्रेष्ठले भने, ‘हामी विश्वास गर्छौँ, जब क्लबिङ उद्योग आफैँ ठूलो र राम्रो हुन्छ तब हामी सबैलाई फाइदा हुन्छ । यो उपलब्धि एलओडीद्वारा हासिल भएपनि मनोरञ्जन उद्योगमा अन्य क्लब र व्यवसायीहरुको लागि सकारात्मक उपलब्धिको प्रतिनिधित्व गर्छ ।’
क्लब एलओडी २०१९ मा स्थापना भएको थियो भने पछिल्लो समय धेरैको रोजाई बन्न सफल भएको छ । सो क्लबमा भारतीय कांग्रेस आईका नेता राहुल गान्धी समेत पुगेका थिए । यस्तै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहदेखि भीआईपीहरु पनि बेलाबेला पुग्ने गरेका छन् ।